Safal Khabar - शिक्षण संस्थाहरू बने राष्ट्र बन्छ
शिक्षण संस्थाहरू बने राष्ट्र बन्छ
मङ्गलबार, १५ पुष २०७६, १५ : ५३
- जयराज आचार्य
केही समय अगाडि मलाई रनभ्यान नामक एक संस्थाले आफ्नो वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएको थियो । रनभ्यान राष्ट्रसंघको स्वयंसेवी कार्यक्रममा गएर विश्वका धेरै द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा भौतिक तथा प्रशासनिक पुनर्निर्माण र अन्य धेरै काम गरेको अनुभव सँगाली स्वदेश फर्केका नेपालीहरूको संस्था हो ।
त्यस सभामा जम्मा एक लाख जनसंख्या भएको सुदूर दक्षिण–पूर्वीय प्रशान्त महासागरीय टापु टोङ्गादेखि आन्ध्र महासागरको पश्चिमी छेउ हैटीसम्म काम गरेका महिला तथा पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो । धेरैले अफगानिस्तान, सुडान, बुरुन्डी, कोसोभो जस्ता ठाउँमा ज्यादै जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरेका । अफगानिस्तान जस्तो देशमा महिलालाई असमान व्यवहार गर्ने तालिबानहरूसित पनि काम गरेका नेपाली महिलासमेत त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । त्यो थाहा पाउँदा मलाई एक रोमाञ्चकारी अनुभव भयो । त्यहाँ मैले एउटा छोटो सम्बोधन गरें, जसको सारांश यस्तो थियो :
तपाईंहरू विश्वका अनेक देशमा गएर जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गरेको अनुभव लिएर आउनुभएको छ । हाम्रा लागि तपाईंहरू एउटा सानो राष्ट्रसंघ नै हुनुहुन्छ । तपाईंहरू समक्ष उभिएर केही बोल्न लाग्दा मलाई के भनूँ, के भनूँ जस्तो लागेको छ । त्यसैले बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दैगर्दा भनेको कुराको अहिले मलाई याद आइरहेछ । नेपालको इतिहासमा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले बोल्दा उहाँका मनमा देशको परिस्थिति खासगरी नेपालको अविकसित अवस्था र जनतामा व्याप्त अशिक्षा र गरिबीको चित्र थियो । त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले योजना आयोगको भित्तामा राजाको फोटो त राख्नुभएकै छ । अब एउटा झोपडीको अगाडि हलोसँगै उभिएको गरिब नेपाली किसानको फोटो पनि भित्तामा झुन्ड्याउनोस् । अनि नेपालको विकासको योजना बनाउँदा आफैलाई सोध्नोस्, ‘मैले बनाएको यस योजनाले त्यस गरिब किसानको जीवनमा के सुधार ल्याउन सक्छ ? के परिवर्तन ल्याउन सक्छ ?’ तपाईंहरूले बनाएको योजनाको मुख्य लाभ उसले पाउनुपर्छ ।’
आज तपाईंहरूले देश–विदेशबाट ल्याएको ज्ञान र अनुभव नेपालको अमूल्य निधि हो । अब यो निधिलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमात्र प्रश्न छ । अब तपाईहरूले आफैलाई सोध्नुपर्छ, ‘मैले विदेशमा कठिन परिस्थितिमा काम गरेर ल्याएको मेरो अनुभवले नेपालको विकासका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? म मेरा देशका जनतालाई के दिन सक्छु ?’ हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल दस वर्ष लामो युद्धबाट गुज्रिएर अनि भूकम्प लगायत अनेक विपत्ति पार गर्दै फेरि उठ्ने प्रयास गरिरहेछ ।
मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु– शिक्षित देश धनी र विकसित छन् । अशिक्षित देश गरिब र अविकसित छन् । नेपाल अविकसित छ, किनकि यहाँ अझै पनि धेरै अशिक्षा छ । यति साधारण कुरा पनि नबुझेझैं गरी हालका हाम्रा नेताहरूले शिक्षाको विकासमा किन धन र श्रम लगाएका छैनन् ? उदेकलाग्दो कुरा छ । युजिन ब्रामर मिहालीको ‘फरेन एड यान्ड पोलिटिक्स इन नेपाल’ भन्ने किताब हेर्नुहोला । नेपाल सरकारले २०१६ सालमा १,६०० र २०१७ सालमा ६०० प्राथमिक विद्यालय खोलेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि २०१६ सालमै खोलिएको हो । त्यतिखेर सरकारलाई देश विकास कसरी गर्ने हुटहुटी थियो । अहिले पनि त्यही हुटहुटी हुनुपर्ने हो । तर आज देशको पहिलो र पछिपछि खुलेका अन्य विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भागबन्डा र गुणस्तरहीनताको केन्द्र बनेका छन् । निराशाजनक प्राज्ञिक स्थिति छ । तर देश विकासको लागि सरकारको मात्र मुख ताक्ने पक्षमा म छैन । त्यसैले हामीले व्यक्तिगत रूपमा वा यस समूहको तर्फबाट सामूहिक रूपमा के गर्न सकिन्छ ? त्यो सोचौं ।
यतिखेर म डा. सुरेशराज शर्माको नाम लिन चाहन्छु, जसले आफूले जीवनभर सँगालेको शिक्षा क्षेत्रको अनुभवका आधारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय खडा गरेर देशलाई दिनुभएको छ । त्यहाँ आज विदेशका समेत विद्यार्थी आएर पढिरहेछन् । नेपालका अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर माथिल्लो पनि छ । एक दिन मलाई सुरेशराज सरले आफ्नो ‘बिर्सन नहुनेहरू’ भन्ने सानो किताबको भूमिका लेखिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । त्यसमा शिक्षा क्षेत्रका तीन, प्रशासन क्षेत्रका तीन, स्वास्थ्य क्षेत्रका तीन र दाताहरूमध्ये तीन गरी बाह्रजना नेपालीबारे संक्षिप्त बाह्र अध्याय छन् । शिक्षा क्षेत्रका तीन जनामा स्व. शंकरदेव पन्त, स्व. अमृतप्रसाद प्रधान र पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका संस्थापक जर्ज जोन हुनुहुन्छ । म आफू सानो मानिस हुनाले संकोच मानी–मानी भूमिका लेखेँ, ‘आज स्वर्गबाट शंकरदेव पन्त र अमृतप्रसाद प्रधानको आत्माले भनेको होला, बाबु सुरेशराजजी, हामीले त देशलाई एउटा–एउटा कलेजमात्र दिएर आएका थियौं, तिमीले त विश्वविद्यालय नै दियौ, तिम्रो दीर्घायु होस् । हाम्रो यही आशिर्वाद छ ।’ शिक्षण संस्था खोल्नु राष्ट्रनिर्माणको जग हाल्नु हो ।
अनि म लमजुङ दुराडाँडाका स्व. श्रीकान्त अधिकारीलाई पनि सम्झन चाहन्छु । कारण उही छ । २००८ साल साउनमा दुराडाँडा मौजा (आजकालको गाउँपालिका) मा श्रीकान्त अधिकारी समेतका अग्रजहरूको अगुवाइमा एकैपटक चौधवटा प्राइमरी स्कुल स्थापना गरिए । स्वयंसेवी युवाहरूले नि:शुल्क शिक्षादान गरे । पछि ती चौधमध्ये बाह्रवटा विद्यालयले सरकारी स्वीकृति पाए । अनि २००९ साल कात्तिकमा सर्वोदय मिडिल स्कुल स्थापना गरियो । त्यसमा पनि श्रीकान्तजीको प्रमुख योगदान रह्यो । आज त्यस स्कुलका उत्पादनहरू धेरै डाक्टर, इन्जिनियर, प्रशासक, शिक्षाविद् भई जापान, अष्ट्रेलियादेखि बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा लगायत संसारभरि फैलिएका छन् । त्यसैगरी श्रीकान्त अधिकारीले घर–घरबाट मुठीदान गरी पाणिनि संस्कृत हाइस्कुल पनि खोल्नुभयो । एक घरबाट एक मुठी चामल दिनाले गाउँमा एक विद्यालय चलाउन सकिन्छ भनेर देखाइदिनुभयो । त्यो उहाँको कीर्ति र राष्ट्रिय योगदानको नमुना हो । त्यसैले म दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु, शिक्षण संस्था खोल्नु यशस्वी काम हो, राष्ट्रनिर्माणको जग हाल्नु हो ।
म प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको पनि अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु । यो विश्वविद्यालय पोखरा नगिचै पृथ्वी राजमार्गको छेउमा खोल्ने विचार गरिएको छ भन्ने सुनेको छु । तर पोखरा विश्वविद्यालय त छँदैछ, विश्वविद्यालय जस्तै ठूलो पृथ्वीनारायण क्याम्पस पनि छँदैछ, नगिचै एउटा थप विश्वविद्यालय किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । ठिक हो । हाल चलिरहेका राजनीतिक भागबन्डाका विश्वविद्यालय वा कलेज, क्याम्पसजस्तै अर्को गुणस्तरविहीन विश्वविद्यालय चाहिएको छैन । तर साँच्चैको गुणस्तर भएको विश्वविद्यालय, कलेज वा हाइस्कुल पनि चाहिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने त्यस्तो प्राथमिक विद्यालयकै पनि खाँचो छ । व्यावसायिक सीप सिकाउने तालिम केन्द्रहरूको त झनै आवश्यकता छ । बेरोजगार हुने स्नातकहरू उत्पादन गर्ने विद्यालयको चाहिँ कुनै आवश्यकता छैन । सम्बन्धन दिएर पैसा लिने अर्को विश्वविद्यालय पनि चाहिएको होइन ।
अमेरिकाको बोस्टन सहर र त्यसको आसपास क्षेत्रमा मात्र पैंतीसवटा विश्वविद्यालय र कलेज छन् । हार्वर्ड र एमआईटी विश्वकै सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्था पनि केवल आधा घन्टाको पैदलयात्रा दूरीमा त्यहीं छन् । त्यसकारण बोस्टन सहरका निवासीहरू गर्वसाथ भन्छन्, ‘बोस्टन विश्वको बौद्धिक ऊर्जाघर (पावरहाउस) हो ।’ हिजो त्रि–चन्द्र कलेजमात्र रहेको काठमाडौं सहरमा पनि आज दर्जनौं कलेज छन् । समस्या संख्याको होइन, गुणस्तरको हो । त्यसैले म अनुरोध गर्छु— शिक्षा क्षेत्रमा एउटा उच्च गुणस्तरीय काममा हाम्रो शक्ति, बुद्धि र साधनस्रोत लगाऊँ र एउटा चिरस्मरणीय योगदान गरौं ।
यस प्रसङ्गमा स्व. विद्वान् यदुनाथ खनालसित भएको एउटा कुराकानीको सम्झन चाहन्छु । मैले एक दिन उहाँलाई सोधेँ, ठूलो मानिस कसलाई भन्ने ? धेरै धनीलाई ? राजालाई ? राष्ट्रपतिलाई ? प्रधानमन्त्रीलाई ? वीर योद्धालाई ? कसलाई ? उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले संस्था बनाउँछ, उसलाई ठूलो भन्नुपर्छ ।’ मेरो चित्त बुझ्यो । उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘आज बेलायतबाट अक्सफोर्ड र केम्ब्रिज विश्वविद्यालय झिकिदिने हो भने त्यससित अरू के नै रहन्छ र ?’ मेरो चित्त झनै बुझ्यो । हुन पनि, आज एक हजार वर्ष पुरानो अक्सफोर्ड, नौ सय वर्ष पुरानो केम्ब्रिज, चार सय वर्ष पुरानो हार्वर्ड । अनि जम्मा साठी वर्ष पुरानो मेरो त्रिभुवन विश्वविद्यालय । त्यो पनि भागबन्डाको सिकार । टीबी रोग लागेको मरणासन्न बिेरामीजस्तो । कति टिठलाग्दो कुरा छ ?
कुनै राष्ट्र सफल या असफल हुने, विकसित या अविकसित हुने कुरा त्यसका संस्थाहरूमा भर पर्छ । यसबारे एमआईटीका दुई प्रोफेसरहरू जेम्स रबिन्सन र डारोन आसमोग्लुको विश्व प्रसिद्ध किताब पनि यहाँहरूले पढ्नुभएकै होला, ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ । उनीहरू त्यस किताबमा सप्रमाण त्यही भन्छन् । जुन देशमा संस्थाहरू विकसित भएका छन्, ती आर्थिक लगायत सबै दृष्टिले सम्पन्न हुन्छन्, जुन देशमा संस्थाहरू विकसित भएका छैनन्, ती अविकसित, असुरक्षित र असफल हुन्छन् । उनीहरूले भनेको संस्था शिक्षण संस्थामात्र होइन । अदालत, प्रशासन, राजनीति र मुख्यतया कानुनको राज्य हो । मलाई लाग्छ, ती संस्थाको विकासका लागि पनि शिक्षण संस्था नै चाहिन्छ । शिक्षा नभएको देशमा अदालत, प्रशासन, राजनीति र कानुनको राज्यको अवधारणा विकसित हुनै सक्तैन । बेलायतमा लिखित संविधान नहुँदा पनि प्रजातन्त्रको त्यति पुरानो अभ्यास चालु रहनुका कारण कानुनी राज्यको संस्कार र त्यो संस्कार विकसित गर्ने शिक्षण संस्थाहरू नै हुन् ।
त्यसैले मेरो अनुरोध छ कि हामी नेपालको शिक्षा विकासका क्षेत्रमा सानै भने पनि केही काम गरौं । दिनको एक मुठी अन्न उठाएर विद्यालय चलाउने श्रीकान्त अधिकारीलाई सम्झौं । तपाईं–हामी जो पनि महिनाको पाँच सय रूपियाँ दान गर्न सक्छौं । त्यो भनेको दिनको सत्र रूपियाँ जति हो । आजकल सय रुपियाँले एकछाक तरकारी आउँदैन । महिनामा पाँच सय दिने जम्मा एक सयजना भयौं भने पचास हजार हुन्छ । त्यस्ता दुई सय मानिस भइयो भने त एक लाख नै हुन्छ । वर्षदिनमा बाह्र लाख हुन्छ । त्यसले एउटा छात्रवृत्ति खडा हुनसक्छ । अथवा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा रनभ्यान प्रोफेसर अफ डिभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको इज्जतिलो चेयर खडा हुनसक्छ । अथवा त्यो रकम महावीर पुनजस्ता त्यागी, कर्मठ, देशभक्त वैज्ञानिकको आविष्कार केन्द्रलाई वर्षैपिच्छे दिन पनि सकिन्छ । देशका लागि मरिमेट्ने उहाँले आफ्नो म्यागासेसे मेडल लिलाममा राखेको छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ, त्यो एक लज्जास्पद विडम्बना हो ।
गोर्खाको बिसे नगर्चीले एक रुपियाँ चन्दा दिएर सुरु गरेको अभियानले आजको नेपाल एकीकरण भएको हो । त्यो नबिर्सौं । निसाफ हराए गोर्खा जानू भन्ने उखान नबिर्सौं । स्वच्छ निसाफ हुने व्यवस्था नै राष्ट्र बनाउने संस्था हो । त्यसको आधुनिक आधार निर्माण गर्ने पनि शिक्षण संस्थाले नै हो, जसले ज्ञान पैदा गर्छ । त्यसमा लगानी गरौं । (कान्तिपुर)
हार अथवा असफलताका बारेमा संसारमा धेरै पुस्तकहरु...
१. चल्न थाले सार्वजनिक यातायात
२. वामदेवको सुझाव ओलीले दुई वर्षमै बिर्सिएपछि...
३. स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : छानबिनमा तानिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
४. जुनमा अमेरिकी बजेट घाटा आठ खर्ब ६४ अर्ब डलर
५. सभामुखलाई बुझाइयो सोती घटनाको प्रतिवेदन
६. तनहुँ पहिरो अपडेट : मृतकको सङ्ख्या ११
७. बङ्गलादेशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाखको हाराहारीमा, निको हुनेको सङ्ख्या ५४. ३१
८. कोरिया जान पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन
९. नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर